MCP Actions - Fihetsiketsehana Photoshop sy preset Lightroom | MCP Actions ™
Momba ny hetsika MCP
Ny hitsin-dàlan'ny sary tsara kokoa
Hetsika Photoshop amin'ny sary vao teraka
Hetsika Photoshop tena ilaina
Famaranana ny hetsika Photoshop
Hetsika Photoshop Artistic
Preset an'ny Lightroom
Fitaovana fanofanana sy fianarana sary
Boards sy modely momba ny tantara
Mpanampy sy mpitari-dalana
Fampianarana horonantsary maimaimpoana momba ny sary sy ny fanovana
Aza mampiasa az, AZ, 0-9, dash ary soritrisa fotsiny.
MCP Actions ™ FITAOVANA FANORENANA SY FAMPIANARANA PREMIUM ho an'ny saripika
Photoshop Action, Lightroom presets, Overlay, ary textures
Avelao ny MCP Actions ™ hanampy amin'ny fanatsarana ny sary sy ny fanitsiana anao anio!
Andao isika hanomboka
Ny vokatra MCP dia nasongadina tamin'ny:
Ny fihetsikay PHOTOSHOP tena lafo amidy indrindra Ny hetsika Photoshop nataonay dia nanampy ny mpaka sary hamorona sary tsara kokoa nanomboka ny taona 2006.
Amin'ny tsindry bokotra iray, ny MCP Actions ™ Premium Photoshop Actions dia hanampy anao hahazo sary miloko maranitra kokoa, maivana kokoa, fiovam-po mainty sy fotsy manankarena, sary namboarina miloko ary sary volo voaravaka kanto. Ny lahasa farany nataonay, ny Makeup Toolkit Premium Photoshop Action manome anao fahaizana mampihatra karazana makiazy amin'ny lohahevitrao, amin'ny loko rehetra!
Ny hetsi-tsainay sy ny môdely fanaovanay modely dia mamorona collage amin'ny habe amin'ny web na pirinty ary ampidiro ho azy ao anaty segondra ny sary. Ho fanampin'ny fanomezana hitsin-dàlana amin'ny fanitsiana sary dia apetrakay aminao ihany koa izahay. Amin'ny alàlan'ny fanovana tanteraka Hetsika Photoshop, azonao atao ny manamboatra ny valiny amin'ny fijery mifanaraka amin'ny marikao sy ny orinasanao.
Ny fanangonana ilaina: Photoshop Actions Package
Izay ilainao fotsiny dia manomboka manitsy amin'ny Photoshop. Ity fonosana ity dia misy 3 amin'ny hetsika Photoshop tena ilaina indrindra MCP ™ dia tsy maintsy atolotra. Safidy lehibe raha manomboka manova sary amin'ny Photoshop ianao.
JEREO IZAO PRODUKTY
Raiso daholo ny tany amidy tany am-boalohany indrindra Fihetsiketsehana Premium Photoshop Action Sets MCP Actions ™ dia tokony hanolotra. ara-bakiteny, hetsika an'arivony ao anaty seta 14 dia tafiditra ao anatin'ity bundle ity. Tsara ho an'ny mpaka sary izay tsy maintsy manana izany rehetra izany.
Manomboka amin'ny marainan'ny lohataona ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro amin'ny fahavaratra, ny vanim-potoana tsirairay dia manome ny fahatsapany manokana ny sarinao. Afaka miaraka amin'ity bundle ity ianao manafaingana ny fikoriananao sady manampy ny toe-po mety amin'ny vanim-potoana fotsiny amin'ny sarinao.
Miantsena ny hetsika Photoshop rehetra
PRESET MAZAVA TSARA VAROTRA ANTSIKA Amboary ny sarinao miaraka amin'ny presets an'ny Lightroom premium mba hamoronana asa kanto sy mahavariana.
Na mpaka sary matihanina be atao ianao na mpankafy mafana fo mafana fo, ny fanitsiana sary an-jatony na an'arivony maro dia mitaky fotoana tsy anananao fotsiny. Our Preset an'ny Lightroom apetraho eo amin'ny rantsan-tananao ireo fijery tsy manam-paharoa an'arivony - azo ovaina tanteraka izy rehetra ary azo ahodina 100%. Ny tsara indrindra dia azonao atao ny mametaka ireo preset-tsika. Manomboka amin'ny fanamboarana fampahalalana tsotra ka hatrany amin'ny voka-dratsin'ny tanàna, ny presets an'ny Lightroom dia manana izay ilainao rehetra hamoronana ny valiny tadiavinao. Misafidiana loko marevaka, tanàna an-tanàn-dehibe, antitra ary zavona, mainty sy fotsy tsara tarehy ary sary mihetsika. Amboary tsy manimba ny sarinao RAW na JPG: manangana hatramin'ny fari-piainana fotsy ary mifarana amin'ny tselatra, fifanoherana, frame ary maro hafa. Our Fanangonana tsindry haingana ary Manazava ny presets manana izany rehetra izany!
Ary vantany vao vonona ny hampiseho ny sarinao amin'ny Internet ianao na hanolotra azy ireo ho pirinty, dia ho tianao ny anay Lightroom Template sy Storyboard Preset. Ataon'izy ireo ho rivotra izy ireo.
Presets Quick Clicks Collection ™ Lightroom presets
Preset an'ny Lightroom notsapaina mpaka sary 300 miaraka amin'ny karazany sy ny fahafaha-manao isaky ny toe-javatra fitifirana. Jery ​​tsy manam-paharoa an'arivony eo amin'ny rantsantananao - rehetra azo namboarina tanteraka ary azo ahodina 100%.
Ny bundle Lightroom feno dia manolotra
Ahitana fanangonana marobe an'ny fanovana premium rehetra, ny workflow ary ny preset an'ny Lightroom artista - Ny preset rehetra nataontsika dia natambatra ho vokatra iray. Izany no 1470 totalin'ny preset mihoatra ny 80%!
Manazava ny presets an'ny Lightroom ™
MCP Enlighten ™ dia misy Preset an'ny Lightroom notsapaina mpaka sary 200 mizara efatra dingana mora ampiasaina sy andiana Preset 30 borosy hikarakara ireo fanitsiana kely izay tsy fantatrao fa azonao atao ao Lightroom.
Miantsena ny presetin'ny Lightroom rehetra
TEXTURES PHOTOSHOP FIVAROTANA TSARA AMIN'NY TRANONTSIKA Manampia tantara an-tsehatra amin'ny sarinao amin'ny endrika mazava, aloka manaitra, lanitra manga tsara tarehy, tara-masoandro, fiposahan'ny masoandro, ary maro hafa.
Texture sy overlay ho an'ny Photoshop sy Photoshop Elements dia rakitra an-tsary misy vahaolana avo lenta. Tsy fihetsika ireo ary tsy misy apetraka. Izy ireo dia fomba tsotra hanatsarana ny sary amin'ny Photoshop na Photoshop Elemen amin'ny alàlan'ny fampiasana Layers. Amin'ny ankapobeny ianao dia mitaritarika sy mandatsaka azy ireo amin'ny sary, manamboatra ny maodeliny ary manamboatra fanovana kely mifanaraka amin'ny tsironao.
Sunshine Overlay ho an'ny Photoshop sy ny singa
Sunshine Overlays misy 75 premium overlay ho an'ny Photoshop sy Elemen ho asio tara-masoandro amin'ny sarinao, na dia eny amin'ny habakabaka aza. Ampio sunbursts, taratra masoandro, effets bokeh, sns.
Sky Background Overlay ho an'ny Photoshop sy ny singa
Sky Background Overlays misy 85 sary famahana hi hanoloana haingana ny lanitra sy hampiditra ny loko amin'ny sarinao ivelany. Ovay ho lanitra manga tsara tarehy ny lanitra manjavozavo. Manampia rahona na filentehan'ny masoandro akory aza.
Teknolojia milalao Overlay ho an'ny Photoshop sy Element
MCP Actions ™ Texture Play Overlay dia misy Volavola firavaka tsy manam-paharoa 75 hanampiana fampisehoana lalina sy mazava eo amin'ny sarinao. Tonony izany. Moperao. Ataovy milay io. Miala voly kely amin'ny sarinao amin'ny Photoshop na Elemen!
Miantsena ny firafitra sy ny lamba fisaka rehetra
FAMERENANA TENA AVY AMIN'NY MPANJAKA MCP ACTIONS ™ TENA
Adobe ™ mahatonga ny fanovana azo atao. MCP ™ manamora izany.
"Ny zavatra nataonao sy ny preset nataonao dia nanamora ny fiainako! Voadonan'ny vokatro aho, mahavonjy ahy ny ora fanovana, ary mahazo vola aho! '
"MCP mamelona ny fakana sary ahy. Nitombo avo telo heny ny orinasako hatramin'ny nanombohako nampiasa ny hetsika sy ny preset-nao ary mpaka sary matoky tena kokoa aho."
"MCP Actions no andriamanibaviko fairy sary an-tsaina. Nomenao fahatokisana sy fitaovana ilaiko aho hiasa tsara kokoa ary hamokarana sary tsara tarehy."
"Nahatsemboka ny famoahana sary rehetra tokony nataoko aho taloha. Ankehitriny, noho ny MCP Actions ™, dia afaka nanova haingana ny sariko aho. Ny tsara indrindra, manana ny fotoana malalaka iverenako aho!"
MCP ™ Actions dia mahatonga ny fanovana ho mahafinaritra, haingana ary mora ho an'ny mpaka sary matihanina sy fialamboly. Ny vita tsara, Hetsika Photoshop notsapaina tamin'ny fomba matihanina ary Preset an'ny Lightroom hanatsara ny sarinao. Ny kilasy fampiofanana an-tserasera sy lesona video maimaimpoana ho an'ny mpaka sary dia natao hampianarana anao Photoshop, Elemen, ary Lightroom. Jereo hoe ahoana no ahafahanay manampy ny fakana sary azy miavaka rehefa mitsitsy fotoana ianao.
Misorata anarana amin'ny lisitry ny mailaka ho an'ny vaovao, mpanolotra manokana & fanavaozana manan-danja
Alaivo ao amin'ny boaty fampidirana anao ny MCP Actions ™. Ho an'ny manokana farany, fampandrenesana fampidinana maimaim-poana sy toro-hevitra ary fampianarana tsara ho an'ny mpaka sary, dia misorata anarana ho an'ny gazetinay isan-kerinandro eto ambany.
Tianay hanampy anao izahay? Manokatra tapakila fanohanana.
Nisy zavatra tsy nety. Azafady jereo ny fidirana ary manandrama indray.
Ny MCP Actions ™ dia manampy ny mpaka sary matihanina sy fialam-boly hanatsara ny sarin'izy ireo. Ny Photoshop Actions sy Lightroom Presets fanavaozana anay dia manamboatra sary sy mamerina miverina haingana sy mora. MCP ™ Actions dia manome kilasy fiofanana an-tserasera sy fampianarana an-tsary momba ny Photoshop maimaim-poana. Jereo hoe ahoana no ahafahanay manampy ny fakana sary azy miavaka rehefa mitsitsy fotoana ianao.
Kitiho raha mila fanampiana
Asehoy ary lazao
Miantsena ny hetsika fanovana Photoshop rehetra
Miantsenà presets rehetra an'ny lightroom
maka sary Guides
Hetsika Photoshop maimaim-poana, presetin'ny Lightroom ary fitaovana fanovana
© 2019 Photoshop Actions sy preset Lightroom | MCP Actions ™. Zo rehetra voatokana.